DEG DEG:Gudoomiye Mursal oo hada go’aankii ugu adkaa kasoo saaray mooshinka madaxweyne Farmaajo – Puntlandtimes
DEG DEG:Gudoomiye Mursal oo hada go’aankii ugu adkaa kasoo saaray mooshinka madaxweyne Farmaajo
December 12, 2018 Puntland PL
MUQDISHO(P-TIMES)- Qoraal uu ku saxiixanyahay Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ay faafiyeen qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa lagu caddeynayay in Mooshinka Hindise sharciyeedka xil ka qaadista madaxweynaha ee uu qabtay guddoomiyaha 9-kii bishan la waafajin doono sida uu qabo Dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka.
Qoraalkan ayaa ah mid jawaab u ah qoraalkii uu soo saaray Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka C/kariin Buux oo sheegayay in 14 xildhibaan ay sheegeen in magacooda iyo saxiixooda laga been abuurtay, sidaas darteedna mooshinka ku jabay.
Farmaajo waa fake social media-ha ku nool. Wuxuu samaysatay oo beeso ku bixiyaa computero aan dad ahayn oo robots ah oo social media-ha wax ugu soo qora. Wuxuu ku dhahay xog hayaha iyo labada ku xigeen ii dhaha mooshinkii waa burburay. Weligiiba fake buu ahaa hadana wuxuu noqday nin u shaqeeya dawlado kale iyo shirkado
Siciid Cusmaan says:
Magaciisa cusub waxa waaye:
Hogaamiye Koxeed Fake-Maajo